ဆင်တူယိုးမှား ဝေခွဲရခက်စေမည့် တိရိစ္ဆာန် (၁၆) မျိုး - ONE DAILY MEDIA
တိရိစ္ဆာန်တို့ဟာ မတူကွဲပြားမှုများစွာဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိကွဲပြားခြားနားသောမျိုးစိတ်အားလုံးကို သိရှိနိုင်ရန်မလွယ်ကူနိုင်ပါဘူး။ တခါတရံမှာ မျိုးစိတ်တူများ ကြားကခြားနားချက်ကိုသတိတောင်ပြုဖို့ခက်ပါတယ်။ ကွဲပြားသောမျိုးစိတ်များကို ၎င်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်တူညီသောပုံစံများအဖြစ် အမှတ်တမဲ့ မြင်ရလေ့ရှိပါတယ်။
ထို့ကြောင့်မြင်မြင်ချင်း အလွယ်တူ ခွဲခြားလို့မရနိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန် ၁၆ ကောင်ကို ယှဉ်တွဲဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
1. Jaguar vs leopard
ဆင်တူမှုများစွာရှိနေသော်လည်း ကွဲပြားသောတိုက်ကြီးများနှင့်ရာသီဥတုဇုန်များတွင်နေထိုင်ကြပါတယ်။ Jaguar များသည်တောင်အမေရိကအပူပိုင်းသစ်တောများတွင်နေထိုင်ကြစဉ် Leopard များက‌ တော့ အာဖရိက savannas အရပ်တွင်နေထိုင်ကြပါတယ်။ Jaguars များသည်အရွယ်အစားပိုကြီးပြီး ကျားသစ်များနှင့်အခြားကြောင်များစွာနှင့်မတူဘဲ ၎င်းတို့သည်ရေကြိုက်သတ္တဝါများဖြစ်ပါတယ်။
2. Alligator vs crocodile
Alligators များဟာ ပိုကျယ်သော U ပုံဏ္ဍာန် မျက်ပေါက်များရှိပြီး Crocodile များတွင်ထင်ရှားသော ရှည်မျောမျော V ပုံသဏ္ဍာန်မျက်နှာများရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Alligators များ၏အပေါ်မေးရိုးသည် အောက်ခြေထက်ပိုကျယ်သောကြောင့်၎င်း၏သွားများကိုအများစုမမြင်ရပါဘူး။
3. Wasp vs hornet
အင်းဆက်နှစ်မျိုးလုံးကကြောက်စရာကောင်းတာသေချာပါတယ်။ Hornets များက ပိုကြီးပြီး လိမ္မော်ရောင်နှင့်အနက်ရောင်တို့ပါ ၀ င်ကာအစင်းများထက်ကွက်လပ်များနှင့်ဆင်တူပြီး wasp များသည်အရောင်ပိုတောက်ပပြီးအဝါရောင်နှင့်အနက်ရောင်ကွင်းများရှိပါတယ်။ နှစ်မျိုးလုံးကတော့ရှောင်သင့်တဲ့အကောင်များဖြစ်ပါတယ်။
4. Seal vs sea lion
ချစ်စရာကောင်းသောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ပင်လယ်ခြင်္သေ့များကဲ့သို့ ပင်လယ်ဖျံများကိုသင်တွေ့ဖူးမှာပါ ။ Seals များသည်အမွေးများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီး ဝမ်းဗိုက်ကိုသုံးတာ တွားသွားလေ့ရှိပါတယ်။ seal lion များ ကတော့ ချောမွေ့သောအသားနှင့်မြေပြင်ပေါ်တွင်ရွေ့လျားရန်အသုံးပြုသောကြီးမားသော ညှပ်များပါရှ်ိပါတယ်။
5. Turtle vs tortoise
၂ မျိုးစလုံးက ရွေ့လျားနိုင် (အလွန်နှေးစွာ) ပြီး ခြေ ၄ ချောင်းရှိပါတယ်။ သို့သော်“ turtle rock” သည်ရေနေသတ္တဝါများနှင့်ရေကန်များပေါ်တွင် အစွန်းအထင်းများနှင့်စက်ဝိုင်းများနှင့်ဆင်တူသည့်အမှတ်အသားများလုပ်‌လေ့ရှိပါတယ် ။ “ tortoise”က‌ဝောာ့ မြေနေတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ဖြစ်ပြီး သူ၏အချိန်အများစုကိုမြေပြင်ပေါ်တွင်ကုန်ဆုံးပါတယ်။
6. Raven vs crow vs rook vs jackdaw
corvid အများစုဟာ အတော်လေးဆင်တူကြပါတယ် Ravens များသည်လည်ချောင်းအမွေးများ“ မုတ်ဆိတ်” နှင့်ဖက်ရှင်အကျဆုံးဖြစ်ပါတယ် ။ ကျီးများနှင့်တောရိုင်းများသည်အရွယ်အစားတူကြပြီး Rook များသည်သူတို့၏ခြေထောက်များတွင်မီးခိုးရောင် ထူးခြားသောအမွေး များရှိပါတယ်။ Jackdaws ဟာ တိုတောင်းသောနှုတ်သီးများ အနက်ရောင် ဦးခေါင်းများနှင့် လုံးဝန်းသောခေါင်းများကြောင့်နာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
7. Donkey vs mule
ဤအချက်ကတော့ ရှင်းပြရန်အတွက်ခက်ခဲသည်။ Donkey ဟာကိုယ်ပိုင်မျိုးစိတ်ရှိ‌ သော်လည်း Mule ကတော့ မြည်းနှင့်မြင်းမျိုးစပ်ထားပါတယ်။
8. Hare vs rabbit
ချစ်စရာကောင်းတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးလိုချင်ရင်ယုန်ဟာ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြသ်ပါတယ်။ သိူ့သော် ယုန်မဟုတ်သော hare များသည်ပိုကြီးပြီး ခြေထောက်နှင့်နားများပိုရှည်ပါတယ်။ ယုန်များက ပိုသေး၊ ပိုနူးညံ့ပြီး သစ်သီးများ (မုန်လာဥနီကဲ့သို့) နှင့်နူးညံ့သောမြက်ခင်းများကိုနှစ်သက်ကြပြီး hare များက အခေါက်နှင့်သစ်ကိုင်းများကိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။ယုန်များက လူကြားထဲ နေလေ့ရှိပြီး ပြီး Hare များကတော့ တစ်သီးတစ်သန့်နေကြပါတယ်။
9. Moth vs butterfly
ပိုးဖလံများမှာ တဲ ကဲ့သို့ အတောင်ရှိပြီး လိပ်ပြာများက အတောင်များကိုဒေါင်လိုက်ခတ်ပါတယ်။ ပိုးဖလံများသည်အများအားဖြင့်သူတို့၏အတောင်များကိုဖွင့်ထားပြီးလိပ်ပြာများသည်သူတို့၏အတောင်ပံများကိုပိတ်ထားပါတယ်။။ လိပ်ပြာများက ရှည်သည်၊ ပါးသည်၊ ပိုးကောင်များ ကတော့ တိုပြီးအမွေးများပါတယ်။လိပ်ပြာများသည် များသောအားဖြင့်နေ့ခင်းဘက်တွင်ရှိကြပါတယ်။
10. Dolphin vs porpoise
Dolphin နှင့် porpoise များအကြားခြားနားချက်က တော့ ၎င်းတို့၏ နုတ်သီး နှင့် ဆူးတောင် များ ပေါ်မူတည်ပါတယ် ။ Dolphin များတွင်ရှည်လျားသောနှုတ်သီးများ၊ သေးသွယ်သောကိုယ်ထည်များနှင့်ကွေးညွှတ်ထားသောကျောရိုးများရှိပြိး Porpoises များတွင် နှင့် တိုသောတြိဂံပုံ ဆူးတောင် များရှိပါတယ်။
11. Weasel vs stoat
ဒီတိရစ္ဆာန် ၂ ကောင်ဟာ မျိုးစိတ်တူတွေဖြစ်ပါတယ်။ Stoats များသည်ပိုကြီးပြီး အမြီးရှည်များပါ ၀ င်ကာ weasels ၏အမြီးများသည်တိုတောင်းပြီး အခြားအစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့အရောင်တူပါတယ်။ Stoats များက ကျောခုံးတစ်ခုနှင့်အတူ ခုန်ဆွပုံစံဖြင့်ရွေ့လျားပြီး weasel များက နိမ့်ပြီးမြေပြင်နှင့်ပိုနီးပါတယ် ။ Stoats များသည်ဆောင်းရာသီတွင် အဖြူရောင်ပြောင်းသွားပါတယ်
12. Eagle vs hawk vs falcon
လင်းယုန်များက ချောက်ကမ်းပါးများနှင့်တောင်များကဲ့သို့ပွင့်လင်းသောနေရာများတွင်နေထိုင်ရခြင်းကိုနှစ်သက်သော ငှက်များဖြစ်ပါတယ်။ Hawks များက အနည်းငယ်သေးငယ်ပြီးလေထဲတွင်လည်း သွက်လက်သွက်လက်ရှိပါတယ်။Falcons များက ဤ၃ မျိုးတွင်အသေးငယ်ဆုံးနှင့်အလျင်မြန်ဆုံးနှင့်အမြင်အာရုံကိုအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ဟာ ပိုကြီးသောမျက်လုံးများနှင့်တိုသောနှုတ်သီးများလည်း ရှိပါတယ်။
13. Mouse vs rat
ဤကြွက် (၂) ကောင်ကို ၎င်းတို့၏အရွယ်အစား၊ အမြီးနှင့်နားရွက် အချက် ၃ ချက်ဖြင့်အလွယ်တကူခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ Mouse က rats များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် သေးငယ်ပါတယ်။။ ၎င်းတို့တွင်အမွေးများဖုံးလွှမ်းထားသောပါးလွှာရှည်လျားသည့် အမြီးများရှိပြီး rats များ၏အမြီးများသည်ထူထဲပြီး အမွှေးမရှိပါဘူး။ Mice များတွင် သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားထက်ပိုကြီးပြီးသော နားရွက်များရှိပြီး လုံးဝန်းပါတယ်။ rats များ၏မျက်နှာ ကတော့ ပိုမိုထင်ရှားပြီး ပြားပါတယ်။
14. Seagull vs albatross
စင်ရော်များက ရေအနီး ပင်လယ် (သို့) ကန်များများတွင်‌ နေထိုင်ပြီး ၊ ရေငုပ်ခြင်းနှင့်ငါးဖမ်းခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ Albatrosses ကတော့ ပင်လယ်ထက်၌အဆက်မပြတ်ပျံသန်းနေသောထူးခြားငှက်များဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့မှာရေနဲ့အစာတွေ ပေါ်ရှိ ဆားတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့နှာခေါင်းတွေတောင်ရှိပါတယ်။
15. Wolverine vs honey badger
မတူညီသောရာသီဥတုဇုန်များတွင်နေထိုင်ကြသော်လည်းအာဖရိကတွင်နေထိုင်သောပျားရည်ပူဆာနှင့်မြောက်ပိုင်းသစ်တောများတွင်နေထိုင်သော wolverine တို့ဟာ Mustelidae မိသားစုမှ မျိုးရိုးများဖြစ်ပါတယ်။Wolverines များမှာ ခြေထောက်ရှည်များ၊ သိသာထင်ရှားသောနားရွက်များ၊ အဝါရောင်ကွင်းများနှင့်အညိုရောင်အမွေးများရှိပါတယ်။ ပျားရည်ပူဆာများသည် နိမ့်သောကြောင့်မြေကြီးနှင့်ပိုနီးပြီးကျောတွင်အဖြူရောင်လိုင်းနှင့်အနက်ရောင်ကိုယ်ခန္ဓာရှိပါတယ်။
16. Wolf vs coyote vs jackal
ဤ ၃မျိုးကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၌ မြင်နိုင်ပြီးအထီးအမမျိုးစုံရှိပါတယ် ။ မြေခွေးများသည်အာဖရိက၊ အာရှနှင့်အိန္ဒိယတို့တွင်နေထိုင်ပါတယ်။ မြောက်အမေရိကတွင် coyotes များနေထိုင်ပြီး ဝံပုလွေများက နေရာအနှံ့တွင်နေထိုင်ကြပါတယ် ။ ဝံပုလွေများသည်ကြီးမား သန်မာသောတိရိစ္ဆာန်များဖြစ်ကာ coyotes နှင့်မြေခွေးများက တော့ ပိုပိန်လှီကြပါတယ်။
Coyotes များကို သူတို့၏မျက်နှာများနှင့်နားရွက်များပေါ်ရှိအနီရောင်အမွေးဖြင့် မှတ်သားနိုင်ပြီး မြေခွေးများတွင်အဝါရောင်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် မြေခွေးများက ဆောင်းရာသီ၏ ကြမ်းတမ်းမှုကိုခံနိုင်ရည်မရှိပါဘူး
Funny bonus: Wolverine vs the honey badger
ဘယ်လိုတိရစ္ဆာန်မျိုးတွေကို သင်ဝေခွဲမရဖြစ်ဖုးပါသလဲ ? သင်သိပါက၎င်းတို့အား comment တွင်ဝေမျှပါဦး
သင့်မီးဖိုချောင်အခက်အခဲများကို ပြေလည်စေမယ့် လျိုဝှက်ချက် (၁၅) ချက်